Indawo ekhethekileyo yebalcony-50m ukusuka ePatan Durbar Sq - I-Airbnb
Indawo ekhethekileyo yebalcony-50m ukusuka ePatan Durbar Sq
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSailesh, Sohan, Nigen
USailesh, Sohan, Nigen yi-Superhost
Indawo yestudio ebanzi eKwalkhu Chowk entliziyweni yePatan entle yembali (iimitha ezingama-50 kude nePatan Durbar Square kunye neGolide Temple) -
I-Balcony House Apartment isetelwe kwindlu yaseRana ehlaziywe ngokumangalisayo eneebhalkhoni zokwenyani zamaplanga, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle, ibhedi enkulukazi, indawo yokusebenza. Inomthamo wokusingatha abantu aba-2 ngokukhululekileyo ngokukwazi ukongeza ibhedi eyongezelelweyo
Indlu yeBalcony yeyona ndlela yakudala ihlaziyiweyo yeNewari House eyakhiwe ngendlela eyongeza izinto ezintle zale mihla ngaphandle kokubeka esichengeni intshukumo yakudala.
Inebhedi enye yobukhulu bokumkanikazi, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle, igumbi lokuhlambela labucala elinamanzi ashushu angama-24hrs, isofa etofotofo ukuze ukonwabele ukubukela iTV, itafile yokufunda/yokusebenza, ukusefa kwi-intanethi ngesantya esiphezulu.
Kwakhona, kukho i-balcony encinci entle yokujonga esitratweni ngaphandle.
Ukuhlala apha, uya kuba kwindawo embi kakhulu entliziyweni yePatan yembali. Kumgama olinganayo (50 m!) ukusuka kwiTempile yeGolide kunye nePatan Durbar Square emangalisayo. Awunakukwazi ukufumana ubumelwane obuyinyani kunye nemveli; Nje ukuba ufumene iPatan endala, awusoze ufune ukuhlala eThamel kwakhona! Xa uhlala kule nxalenye yedolophu ujikelezwe ziitempile zamaHindu, ii-stupas zamaBuddha, iimonki, iindawo zokutya zasekhaya kunye neentendelezo ezifihlakeleyo ezineendlela ezifihlakeleyo. Akukho nanye kuloo nto eye yanyamalala kwinyikima ;-) Ubomi basekuhlaleni obudlamkileyo baseNewars (iqela lokuqala leNtlambo yaseKathmandu) buqinisekisa amava enkcubeko atyebe kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Sailesh, Sohan, Nigen
Izimvo eziyi-1 462
Sihlala sonwabile ukunceda iindwendwe zethu ngayo nantoni na ezinokuyifuna kwaye sibe nencoko entle kunye nabo. Iindwendwe zethu zinokusifumana yonke imihla kwiOfisi yethu yaseNepal eCozy ekumgangatho ophantsi weYatachhen House eSwotha Square (iimitha ezili-100 kude).
Sihlala sonwabile ukunceda iindwendwe zethu ngayo nantoni na ezinokuyifuna kwaye sibe nencoko entle kunye nabo. Iindwendwe zethu zinokusifumana yonke imihla kwiOfisi yethu yaseNepa…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Patan